China Custom Tungsten Carbide Akara mgbanaka maka Mechanical Seal Manufacture and Factory | N & D Na-eme Ihe
Omenala Tungsten Carbide Akara mgbanaka maka Mechanical Seals
Tungsten carbide n'ibu akàrà-eji-esiwanye na ọmụmụ mgbapụta dochie juru n'ọnụ gland na egbugbere ọnụ akara. tungsten carbide n'ibu akara mgbapụta na n'ibu akara ịrụ rụọ ọrụ nke ọma na-adịkarị ịrụ ọzọ reliably maka ogologo oge.
Dị ka ọdịdị ahụ si dị, a na-akpọkwa akara akara ndị ahụ akara yiri mgbaaka tungsten carbide. N'ihi nnukwu ihe nke tungsten carbide, tungsten carbide mechanical seal rings na-egosi ịdị ike dị elu, nke kachasị mkpa bụ na ha na-eguzogide nsị na abrasion nke ọma. ya mere, tungsten carbide mechanical yiri mgbaaka na-enwe wider ojiji karịa akàrà nke ihe ndị ọzọ.
Tungsten carbide n'ibu akara na-nyere iji gbochie pumped ọmụmụ si na-eri si tinyere draịva aro. Lezọ leakage a na-achịkwa dị n'etiti elu abụọ dị larịị jikọtara ya na oghere na-agbagharị na ụlọ n'otu n'otu. Mgbapu uzo uzo a di iche dika ihu na-agbanwe agbanwe nke ozo nke na-eme ka ihu ha na ibe ha.
The ngwaahịa chọrọ a dị iche iche aro ụlọ imewe ndokwa tụnyere na nke ọzọ ụdị n'ibu akara n'ihi na n'ibu akara bụ ihe mgbagwoju anya ndokwa na n'ibu akara anaghị enye nkwado ọ bụla na aro.
Tungsten carbide mechie akara mgbaaka na-abịa n'ụdị abụọ bụ isi:
A ga-ezere Cobalt agbụ (ngwa Ammonia)
Nickel kere (Nwere ike iji ya mee ihe na Amonia)
A na-ejikarị ihe ntinye ihe 6% eme ihe na mgbanaka akwara tungsten carbide, ọ bụ ezie na ọtụtụ dịgasị. Nickel-bonded tungsten carbide mechanical seal ring bụ ndị ajupụtara na ahịa mgbapụta mmiri na-abawanye n'ihi mmụba nrụrụ ha ka mma ma e jiri ya tụnyere ihe ndị nwere agbụ.
Nke gara aga: Tungsten Carbide Akara Mgbaaka na Nzọụkwụ maka Mechanical Seals
Osote: Tungsten Carbide Bush maka Igwe mgbapụta Ọdụdọ